အင်တာနက်က Porn အတွက်ဦးနှောက်ထင်သလောက် - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ ဦးနှောက်အခြေခံ အင်တာနက်က Porn အတွက်ဦးနှောက်ထင်သလောက်
ငါတို့သာလျှင်ငါတို့ကိုအမှန်ခြစ်ပေးသည်ကိုညွှန်ကြားချက်လက်စွဲဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်ဆိုပါက! အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုက ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းရှိဖို့တကယ်ပဲကူညီလိမ့်မယ်။ သတင်းကောင်းသည်သင်ယူရန်နောက်ကျလွန်းသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကားတစ်စီးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုမည်သို့လုံခြုံစွာမောင်းနှင်ရမည်ကိုလေ့လာရန်အတွက်အင်ဂျင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးပါ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအတိတ်၏ညစ်ညမ်းတူသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပိုပြီးတိုက်ရိုက်နှင့်သတိလစ်လမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာအထူးသညျကြှနျုပျတို့၏တှေးအချေါနှငျ့အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲမြင့်မားခေတ်မီနည်းပညာသှေးဆောငျနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းပညာများသည်အသုံးပြုသူများကိုစွဲပါစေနှင့်ညစ်ညမ်းပိုမိုလွန်ကဲအမျိုးအစားများမှတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ဒီတိုတောင်းသောဗီဒီယိုလေးခုကဘယ်လိုရှင်းပြသလဲ။ ဦး နှောက်သည်ဤလှုံ့ဆော်ပေးသောဖျော်ဖြေမှု၏ဆွဲဆောင်အားမည်မျှထိခိုက်လွယ်ကြောင်းရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကအပြစ်ရှိသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သက်ဆိုင်သည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အမြတ်အစွန်းကိုသာစိတ် ၀ င်စားသည်။
ဤ ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း ၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး၊ ညစ်ညမ်းသက်ရောက်မှုအကြောင်း neurosurgeon နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်နယူးဇီလန်တီဗီမှမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒီလိမ္မာပါးနပ်2မိနစ် ကာတွန်း ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်သက်ရောက်မှုကရှင်းပြသည်။
စတန်းဖို့ဒ်လူမှုစိတ်ပညာပါမောက္ခ Philip Zimbardo သည် ၄ ​​မိနစ် TED ဟောပြောချက်တွင်“ နှိုးဆွမှုစွဲခြင်း” ကိုကြည့်သည်။ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို"။
"မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု"သည်ယခင်သိပ္ပံဆရာနှင့်စာရေးဆရာဂယ်ရီ Wilson ကက 16 မိနစ် TEDx ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Zimbardo အားဖြင့်ချထားစိန်ခေါ်မှုဖွကွေား။ ဒါဟာ YouTube ပေါ်မှာထက်ပို 12.6 သန်းကြိမ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြီး 18 ဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂယ်ရီသည် TEDx ဟောပြောချက်ကို“ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်” ကြာမြင့်စွာတင်ပြပြီးအင်တာနက်က Porn သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထင်သလောက်ဘယ်လို Porn- ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်“ ရာနှင့်ချီသောပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် porn မှထွက်ခွာရန်အဓိကအကြံပေးသူများအတွက် Gary's ကိုကြည့်ပါ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ paperback အတွက်, Kindle ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုအော်ဒီယိုစာအုပ်များအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ။ သူသည်ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတွက်လွန်းသော့ချက်အယူအဆတွေအများကြီးထွက်သတ်မှတ် podcast တခုကို (56 မိနစ်) ။
ဒီ 'ဦး နှောက်အခြေခံများ' အပိုင်းမှာ Reward Foundation ကသင့်ကိုလူ့ ဦး နှောက်ခရီးစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ အခြေခံအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ McGill တက္ကသိုလ်မှထုတ်လုပ်သည်။ ဦး နှောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ် ရှင်သန်နှင့်ရှင်သန်။ ၁.၃ ကီလိုဂရမ် (၃ ပေါင်နီးပါး) လေးသောလူ့ ဦး နှောက်သည်ကိုယ်အလေးချိန်၏ ၂% မျှသာရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏စွမ်းအင်၏ ၂၀% ကိုအသုံးပြုသည်။
ဦးနှောက်ကိုယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌ function ကိုမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဘယ်လောက်ဆုပ်ကိုင်ဖို့, ကြည့်ရှု ဦးနှောက်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်၎င်းအပိုင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်အတူတကွမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရမည် neuroplasticity ။ ဒါကကျနော်တို့အနေနဲ့စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲအပါအဝင်အလေ့အထများကိုသင်ယူနှင့်နားမလည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဦးနှောက်က၎င်း၏အဓိကမှတဆင့်ဆွဲဆောင်မှု, မေတ္တာနှင့်လိင်ဆက်သွယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည် neurochemicals။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆုကျေးဇူးများသို့အဘယ်ကြောင့်မောင်းနှင်ရကြောင်းနားလည်ရန် ဦး နှောက်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရေးကြီးသည် ဆုလာဘ်စနစ်က။ အဘယ်ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရွှေအသက်အရွယ်ဒါလှိုင်းလေထန်ပျော်စရာများနှင့်ရှုပ်ထွေးပါသလဲ ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုထွက်ရှာမည် ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်.